28 | janvier | 2022 | InfoKmada
Archives quotidiennes: 28 janvier 2022
Vokam-pikarohana Siantifika : ahafahana mitahiry sy manatsarana ny Tontolo Taza-maso
InfoKmada - 28 janvier 2022 0
Tsy ampy ankehitriny ny fampiharana ireo voka-mpikaroana siantifika natao hanatsarana sy hampaharitra ny tontolo taza-maso eto Madagasikara raha ny nambaran’ireo mpikaroka. Anton’izany ny tsy fisihan’ny fampafantarana ireo antotan-kevitra azo tamin’ny alalan’ny fikarohana natao, eo koa ny tsy fahampihan’ny fifanankalozana traikefa eo amin’ireo mpisehatra isan’ambaratongany. Natomboka tamin’ny fomba ofisialy androany araka izany ny fametrahana ny Laboratoire Mixte International « paysage à Madagascar ».
RAZANAMAHASOA Christine : fanoherana tsy arahan’asa no misy eto
Tsy hita izay ataon’ny mpanohitra manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny hoy ny filohan’ny Antenimierampirenena androany. Fihetsika izay ahitana taratra fa fanoherana be fahatany no misy eto amin’ny tany sy ny firenena.
RN 2 : ny orinasa sy ireo teknisianina sinoa no tompon’antoka tamin’ny fanamboarana
Ny orinasa sy ireo teknisianina Sinoa no tompon’antoka tamin’ny fampitohizana, tao anatin’ny fotoana fohy ny lalam-pirenena faharoa, tapaka tao Moramanga. Izy ireo no niasa andro aman’alina ka nahafahavitan’ny Déviation sy ny Pont Beilley, ampiasan’ireo mpampiasa ny RN2 rehetra amin’izao fotoana.
Traboina : napetraka ny fandaminana vaovao tsy hahatara ny sakafo
Napetraka ny fandaminana vaovao tsy hahatara ny sakafon’ireo traboina miparitaka amina Site d’Hebergement miisa 91. Tonga ihany koa ankilan’izay ny kitay fanomezana avy amin’ny orinasa Fanalamanga handrahoana ny sakafon’ireo traboina ireo. Fotoana hifanomezan-tanana sy hiraisana hina izao, hoy ireo mpiara-dia amin’ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka izay nanalotra fanampiana teny amin’ny BNGRC androany.
Distrikan’Ambohidratrimo : ankoatry ny tanimboly, trano maro no nianjera vokatry ny orana
Ankoatra ireo tanimbary sy tanimboly, trano maro no nianjera vokatry ny andro ratsy farany teo tao amin’ny distrikan’Ambohidratrimo. Maro ny takaitra ary ho mafy ny fanarenana hoy ny solombavambahoaka izay miantso ny fandraisan’andraikitry ny fitondram-panjakana.
Antananarivo : mitohy ny fanarina fako any anaty lakan-drano
Tsy misy fiovana ny fahatsetseman’ny lakan-drano eto Antananarivo amin’izao raha toa ka tsy miala amin’ny fahazaran-dratsy ny rehetra. Androany raha ny hita, tsy manary fako ao anaty daba fanariana fako ny olona fa eny amin’ny lakan-drano. Manao ny fanadiovana hatrany ny tompon’andraikitra saingy ny toerana efa nodiovina ihany no tsy maintsy hiverenana.